Healthway Medical | Singapore Personalized Patient Care
English Healthway Medical operates the largest network of private clinics and medical centres in Singapore with the history of more than 30 years. With over 100 clinics and specialist centres, our team of highly trained medical staffs will be able to meet all your healthcare needs.
Our commitment to cross sharing of knowledge and skills, within the group and with our affiliate network of almost 400 GP and Specialist clinics, sets Healthway Medical apart. This allows Healthway Medical to provide our patients with appropriate, comprehensive and seamless care. Our strong links and tie-ups with the medical network, including our close association with laboratories and x-ray clinics, have also allowed our patients to leverage on their expertise via our referrals.
We also haveafull time 24-HR mobile medical team to provide medical house calls as well as customized on-site medical coverage and services for various events and projects.
Our Psychologists and Therapists
ENT, Head, Neck & Thyroid
Chest & Internal Medicine
မြန်မာ Healthway Medical သည် စင်ကာပူနိုင်ငံတွင် အကြီးဆုံးသော ပုဂ္ဂလိက ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှု လုပ်ငန်းဖြစ်ပြီး နှစ်ပေါင်း သုံးဆယ်ကျော် သက်တမ်းရှိပါသည်။ ဆေးခန်းနှင့် အထူးကုဌာနပေါင်း ၁၀၀ ကျော်ရှိပြီး၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ အထူးကျွမ်းကျင်အောင် လေ့ကျင့်သင်ကြားထားသော ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများက သင့်ရဲ့ ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်အားလုံးကို ကူညီပေးနိုင်ပါလိမ့်မည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ ရည်မှန်းချက်မှာ အရည်အသွေးမြင့်မားပြီး စိတ်ချရသော ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုနှင့် ၀န်ဆောင်မှုများကို လွယ်ကူစွာနှင့် လူနာအများစုတတ်နိုင်အောင်သက်သာစွာ ပေးနိုင်ရေးပင်ဖြစ်ပါသည်။
စဉ်ဆက်မပြတ်ဆေးပညာ ဗဟုသုတ ရှာဖွေခြင်းနှင့် ကျွမ်းကျင်မှုများဖလှယ်ခြင်းကို မိမိတို့အချင်းချင်းနှင့် ကျွန်ုပ်တို့နှင့် ပူးပေါင်းလက်တွဲလုပ်ဆောင်နေကြသည့် ဆေးခန်းနှင့် အထူးကုဌာနစုစုပေါင်း ၄၀၀ ကျော်တွင် အစိုက်မတ်မတ် လုပ်ဆောင်လျက် ရှိပါသည်။ ဤသို့အားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့ထံတွင် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု လာရောက်ခံယူသူများအား အသင့်တော်ဆုံး၊ အကောင်းဆုံးသော စောင့်ရှောက်မှုကို ပေးနိုင်စေပါသည်။
Healthway Medical Group မှ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုဝန်ဆောင်မှုများ
မိသားစုကျန်းမာရေး Family Medicine
ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးခြင်း Health Screening
အထွေထွေခွဲစိတ် General Surgery
နား၊ နှာခေါင်း၊ လည်ချောင်းအထူးကု ENT
ရင်ခေါင်းအထူးကု Chest & Internal Medicine
ဆေးပညာနှင့် အလှသုခုမအထူးကု Medical Aesthetics
ပလတ်စတစ်ခွဲစိတ်အထူးကု Plastic Surgery